Nagu saabsan - Cangzhou Ruichen Electronic Equipment Co., Ltd.
Kiiska aluminium kirada ah
Golaha rakibida go'an ee gudaha
Golaha dibadda ee rakibidda go'an
Golaha wasiirada caadada u ah
Qalabka kabadhada LED
RuiChen Electronic Equipment Co., Ltd. Waxaa la aasaasay 2003. Waa alaab -qeybiye caalami ah oo ku takhasusay wax -soo -saarka R&D and iyo iibinta armaajooyinka bandhigga LED. Shirkaddu waxay leedahay maalgashi dhan 65 milyan waxayna dabooshaa aag qiyaastii 25,000 mitir murabac ah. Shirkadeena waxaa ku qalabeysan qalab wax soo saar oo horumarsan, naqshadeynta heerka koowaad iyo kooxda horumarinta iyo adeegga ugu waxtarka badan kadib iibka. tayada badeecadaha si waafaqsan heerarka qaranka, iyo qiimaha badeecaddu waa kan ugu hooseeya warshadaha. Waxyaabaha ay shirkaddu soo saarto waxaa ka mid ah kabadhka aluminium-kabka ah, kabadhka biraha aan biyuhu lahayn, golaha kiraynta astaanta aluminiumka, kabadhka shaashadda garoomada, golaha shaashadda tiirka iftiinka, golaha qalooca, golaha shaashadda tiirka iyo alaabooyin kale. Shirkaddayadu waxay iskaashi istiraatiiji ah la yeelatay shirkado badan oo caan ah sida Qiangli, Lijing iyo Ruiling.
Ruichen wuxuu leeyahay tas -hiilaad wax soo saar otomaatig ah oo horumarsan oo heer sare ah iyo kooxda R&D ee xirfadda leh, maareynta wax soo saarka caadiga ah, alaab tayo sare leh iyo kooxda iibka iyo adeegga kaamil ah. Ruichen wuxuu u doodaa cagaar, kaarboon hooseeya, keydinta tamarta, iyo fikirka ilaalinta deegaanka. Ruichen ayaa ku guuleystay “Hebei Well-known Brands”, waxay dhaaftay nidaamka maaraynta tayada tayada ISO9001, FCC, CE, iyo shahaadooyin kale oo shahaadooyin.
Macaamiisha ayaa ah macallimiinteena, iskaashiga aan la leenahay wuxuu na siinayaa fursado waxbarasho oo badan si aan u hagaajinno heerkeenna farsamo iyo heer maamul, oo ah xoogga horseedka u ah wax soo saarkeenna iyo horumarkeenna. Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabda'a ah "samee wax kasta oo suurtogal ah si aad u soo saarto badeecado buuxiya filashooyinka iyo shuruudaha macmiilka" una hoggaansamaan falsafadda ganacsiga ee "warshaddu ma soo saarto badeecado kaliya, laakiin waxaa ka sii muhiimsan, sumcad iyo tayo", oo si joogto ah u nuugta teknoolojiyadda cusub wuxuuna soo bandhigayaa qalab cusub si uu u sameeyo Faa'iidooyinka dhaqaale ee shirkadda ayaa aad u kordhaya. Waxaa la rumeysan yahay in shirkadu aysan marnaba joojin doonin sahaminta iyo horumarinta, isla markaana ay la jaanqaadi doonto horumarinta shirkadaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee adduunka.
No. 44 Wadada Kengwei, Degmada Baoan, Magaalada Shenzhen, Shiinaha
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noo dhaaf emailkaaga oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.